I-Samsung Galaxy S8: ukuze uthathe isithombe sendawo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
El Samsung Galaxy S8 yifowuni enkulu, nangona ibisemarikeni iminyaka eliqela ngoku. Sele ngelo xesha, xa sasinethuba loku yenza uvavanyo olupheleleyo lwesixhoboKwakucacile kuthi ukuba sijongane nesona sisombululo sisiso kwimarike. Ngaba ucinga ukuba iphelelwe lixesha? Ewe, uyazi ukuba uphosakele. Kwaye ucinga ukuba ngoku ungayithenga ngexabiso eliphantsi kunanini na, yenye yezona ndlela zibalaseleyo onokuzijonga.
Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba isazi ngeenkwenkwezi sifumene Ukubamba okumangalisayo usebenzisa ikhamera ye-Samsung Galaxy S8. Ewe uthathe isithombe sikaSaturn kunye nenyanga usebenzisa le fowuni kunye nesiseko esine-intshi ezi-8 zeDobson isibonakude esingagqithiyo kwi-euro ezingama-400. Okanye yintoni enye, kwi-euro ezingama-800 sinokufumana ezinye iinkqubo zenkqubo yethu yelanga enomtsalane.
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S8 isenokuthetha okuninzi
Yayingumvumisi ngeenkwenkwezi wemvelaphi yoMzantsi Afrika uGrant Petersen oye wazuza ifoto enomtsalane eyintloko. Singayibona ngokugqibeleleyo iSaturn, kwaye inemfanelo eyodwa ukuba sithathela ingqalelo izinto eziye zafunyanwa ukufezekisa oku kubanjwa. Ewe inesicupho. Hayi, akakhange ayisebenzise enye ifowuni okanye iteleskopu enamandla ngakumbi, uyifumene ngokwenene le feat kunye Ikhamera ye-Samsung Galaxy S8 kunye nesibonakude esingu-8-intshi iDobson, kodwa akakhange athathe foto, kodwa ushicilele ividiyo.
Uyenzile ngqo ukurekhoda kwizakhelo ezingama-60 ngomzuzwana. Uye walungisa ikliphu esebenzisa inkqubo yokufaka isakhelo ukudibanisa uninzi lweefreyimu zevidiyo ukufezekisa umfanekiso oqaqambe ngakumbi, ofana nekhamera. Ewe, into efanayo naleyo yenziwa yi-NASA ukufota iminyhadala yeenkwenkwezi, kodwa isebenzisa izixhobo ezinqongopheleyo.
I-Galaxy S8 iqala ukuhlaziya kwi-Android Pie eYurophu
Kwaye umphumo uyamangalisa. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba iplanethi ibekwe kwi-1.4 yezigidi zeekhilomitha, kucacile ukuba Ikhamera ye-Samsung Galaxy S8 usenokuzinika kakhulu. Ke ngoko, kwaye uthathe ithuba lokuba ngoku kubiza ixabiso eliphantsi kunakuqala eAmazon, siyakumema ukuba uthenge le fowuni kunye neteleskopu esetyenzisiweyo ukufumana indawo ethile emangalisayo.
Thenga i-Samsung Galaxy S8 Thenga iteleskopu eyi-8 intshi iDobson
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Umthandi weenkwenkwezi? Nge-Samsung Galaxy S8 ungathatha ifoto kaSaturn!